A ga-ewepụta ụdị nke Duke Nukem 3D n'izu na-abịa | Akụkọ akụrụngwa
N'ime ninties ndị mbụ egwuregwu FPS malitere ịbịaru na PC. Malite na Wolfenstein 3D, na-aga n'ihu na Mbibi, Duke Nukem, Heretic…. ọtụtụ egwuregwu taa bụ ndị ochie na ndị kasị ochie nke ebe anyị ji obi ụtọ dị ukwuu echeta. Duke Nukem na-aga ịlaghachi n’ahịa ahụ afọ iri abụọ ka ebidochara ya, mana n’ụdị edegharịrị iji mee emume ncheta afọ iri abụọ nke ya. Duke Nuken zuru ebe niile echetara ya ihe ọjọọ na omume ịkpa ọchị ya, yana inyere aka webata afọ Fps nke bidoro na mwepụta nke mbibi. Ọ bụrụ na anyị gaa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ha, anyị nwere ike ịhụ ngụ oge yana ngụkọta maka ọkwa na izu na-abịa nke ụdị ọhụụ nke egwuregwu a.
Site na ịga na DukeNukem.com webụsaịtị anyị nwere ike lee ihe ngosi nke na-eme ncheta afọ iri abụọ na Ọbịbịa, ma n'okpuru anyị nwere ike ịhụ ngụ oge yana ngụda, nke ga-agwụ na Fraịde na-esote na 5 elekere Seattle. Ihe niile na-ezo aka na ọkwa nke nrụpụta a na-atụ anya nke Duke Nukem 3D. Ihe akaebe ozo n’egosi n’otu uzo bu otutu ozi edeputara na netwok nke ndi mmadu na Facebook na Twitter na-eme ya akaja, njakịrị nke Gearbox Randy Pitchford binyere aka
N'ịhapụ ihe karịrị ihe akaebe doro anya gbasara mbupute ọdịnihu a, anyị ga-aga Reddit maka ozi ndị ọzọ. Onye ọrụ Tezla55 bipụtara ozi na-enweghị nkwenye gọọmentị sitere na isi mmalite, banyere ntọhapụ ọzọ nke Duke Nukem 3D: World Tour, ụdị nke Nerve Software na-emepe. A kọwara ụdị a dị ka nlọghachi na egwuregwu mbụ yana yana remix nke ga-agụnye ọdịnaya ọhụrụ emegharịrị maka oge ọhụrụ. Mgbe ahụ anyị ga-ahapụ gị ọtụtụ nseta ihuenyo nke 90s kpochapụwo Duke Nukem, ihe oyiyi ga - eme ka ị cheta oge kachasị mma gị na egwuregwu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » A ga-ewepụta ụdị nke Duke Nukem 3D n'izu na-abịa
Halogen oriọna ga-akwụsị na September